Rio de Janeiro - I LOVE RIO- UMCULO
Famous embulungeni yonke umculo esiyingqayizivele, ukhombise impilo futhi ngamasiko Lubanzi kube izele ukuba, Rio de Janeiro uhlala elinye lamadolobha ebaluleke kakhulu ekuthuthukiseni kanye nokusatshalaliswa izinhlobo ezintsha.
I LOVE RIO ihlola kwezinkathi ebalulekile emlandweni musical ngokujulile leli dolobha, ngani ithalente ezintsha kanye akhiphe ulwazi mayelana amakhonsathi zakudala imibukiso, imikhosi kanye amaqembu ezindaweni ezihlukahlukene isigqi ezifana Samba, forró, Jazz, Chorinho, Maracatu, nokuningi.
Kuyingxenye ebalulekile Carioca AMASIKO
Umculo kuyingxenye ebalulekile Carioca isiko - okubaluleke ngendlela efanayo njengoba emabhishi kanye emahlathini abusise Rio de Janeiro, umculo Rio kubusa zonke izici zokuphila emzini.
Njengoba umuzi ophila, uphefumula futhi uhamba umculo, Rio de Janeiro libhekene kulo lonke izwe babe njengalabo ethempelini for beats abathanda futhi abaqambi - Related to inkolo, ungubani, imikhosi kanye indlela ephelele yokuphila, umculo uthola isigqi esisha futhi izindima emphefumulweni ngosuku edolobheni kanye ebusuku
Unjalo ukubaluleka umculo Rio, ukuthi uhulumeni umuzi njalo uhlela and sponsors amakhonsathi free and imikhosi: up-no-ezayo abadlali, kanye nezinkanyezi odumile waseBrazil kanye international, njalo ukudlala emibuthanweni edolobheni uxhaso. Stars ezifana Rolling Stones, Rod Stewart, the Black Eye Peas, Lenny Kravitz, David Guetta, Stevie Wonder, futhi Roberto Carlos sonke eyenziwa ngesikhathi amakhonsathi khulula phezu Copacabana noma Ipanema beach - kubutsela izixuku ezinkulu bayaphumelela umbukwane. Eve Njalo ngonyaka omusha, ezihlukahlukene amakhonsathi khulula ihlelwe izindawo eziningana yonkana Rio de Janeiro, ekwamukeleni kokubili abadlali kanye nezethameli ezivela emhlabeni wonke.
Local, kazwelonke, noma international abaculi, njalo lihlonishwe kakhulu nokunaka - eziningana ezibalulekile emigwaqweni, izindlela kanye namapaki e Rio de Janeiro iqanjwe Abaholi Carioca musical, ngubani kakhulu ithathwa njengokuhlola tinganekwane inspirations.
Antonio Carlos jobim, umlobi "Garota de Ipanema," okungenzeka ingoma kakhulu emhlabeni-odumile wabhalwa emzini, lihlonishwa ekwamukeleni yonke isivakashi futhi aphume insimu Rio de Janeiro, njengoba wendawo sezindiza iqanjwe ngaye. Omunye emigwaqweni kakhulu bendabuko esifundeni oyingqophamlando ka Ipanema ibizwa ngokuthi behlonipha vinicius de Moraes, co-umbhali ingoma efanayo
Iculo ahlanganiswe futhi wayecula emgwaqweni, kuhlanganise imoto eyayidlula, noma imishayo Karaoke eziningi pepper umuzi. Kuvamile ukuba ukufakaza isixuku encane ngokuzumayo ukucula noma dancing ingoma ethandwa nje injabulo kwalo, endaweni yokucima ukoma, ogwini, noma embukisweni.
Ngokufanayo lokho emabhishi Rio Masenzeni lokhu, umculo eRio de Janeiro ngokuvamile amabhuloho igebe phakathi ubudala futhi amakilasi - ngesikhatsi zomkhosi, Samba kuyinto Equalizer ecacile social, futhi unyaka ngokuvamile ezisencane nasebekhulile bacule futhi dance isigqi efanayo songs, ezindaweni ezifanayo.
Cariocas ukuthanda umculo futhi bathande umuzi wabo - ngenxa, abaningi amazwi eziningi pop songs, Samba, futhi Bossa Nova izingoma ziphathelene Rio de Janeiro, noma uthando lwabo for the City Marvelous. Kuvezwa ngezindlela eziningi onothando, Rio de Janeiro bekulokhu, futhi iyaqhubeka iba, lodumo kakhulu Carioca Muse.
Dating emuva ekupheleni kwekhulu nesishiyagalolunye, isigqi edume kunazo wazalwa ngo Rio de Janeiro yiyona Samba, wenza ethandwa ngisho nangokwengeziwe ngezizwe odumile zomkhosi imikhosi. Nokho, lo Jazzy Bossa Nova kwaba wadala emzini futhi wathola eziningi amehlo omhlaba kusukela 1962 hit song "Garota de Ipanema". Kamuva, Funk Carioca, owazalwa ngo favelas of Rio in the 1980, isibe nkulumo ebalulekile futhi ethandwa isiko lendawo.
Samba yitshe eliyigugu okukhulu engcebweni musical of the Abantu Carioca, kodwa akuyena yedwa - ezihlukahlukene ezinye amamiksi futhi tunes ukuletha impilo the ezihlukahlukene yokucwaswa futhi ukuchaza izinhlangothi mesmerizing ubuntu lokhu cit sultryy.
I Zomkhosiyisikhathi sokuba Samba, futhi Samba iyona izwi Zomkhosi- nokho, lokhu kutsha awubufakazi kutholakala azungeze idolobha unyaka wonke. Samba kuyinto umsindo Brazil kuzwelonke, futhi uye lomnotho zibe ziningi ezinye isigqi namazwi musical, njengokuthi "Samba ukwenza Breque," a Samba nge ijubane ethile kakhulu lapho umculi awethule umlingisi omusha, enze Monologue iDemo ezihlekisayo noma hlabelela a umlayezo umongo kwengoma. A Samba version of bezingoma, ne dance kanye twist ngenjabulo. romantic lyrics, kuwumphumela Samba Canção, "elaba zithandwa emhlabeni 1950 futhi wabutha inani elikhulu abasekeli, kokubili abakhiqizi futhi abathengi. Sibizwa nangokuthi ukuba njengoba lwasemkhatsini wemnyaka Samba, ngoba ngokuvamile bathola ngaphandle isizini Zomkhosi.
Wazalelwa kusukela mix okuxekethile phakathi Jazz kanye entofontofo Samba beat, Bossa Nova kuyinto yisakhiwo sodumo Indalo Carioca ukuthi ilethe izinkulungwane abaculi emhlabeni wonke, futhi kanye okuyithonya uyaqhubeka kuze kube namuhla.
Ezinokuthula futhi eyinkimbinkimbi, igama ngokwalo lisho "indlela entsha ekhethekile yokwenza umculo" njengoba 'Bossa "kuyinto wokuhlungela we Indlela Carioca, futhi "nova" libonisa a ukulungiswa kwemvelo. Lena indlela uJoão Gilberto, tom jobim futhi vinicius de Moraes, phakathi kwezinye izinkanyezi eziningi nomculo geniuses, wadala in the 1950 isigqi ukuthi oyomuka umuzwa kodwa angaziwa ezweni.
Two osebenzisa yerekhodi anele amazwi "Bossa Nova" ukuza egeleza up ezinhliziyweni komuntu ezindlebeni zomuntu - lokhu umphumela leli ukuhluza esithile has kulabo abazizwa kuwo, njengoba isigqi bushelelezi wonke imiphetho kanye ngomlingo beka nezilaleli ezweni injabulo, imfudumalo umbala: Copacabana.
The umsindo esiyigugu umndeni, abangane, imibuthano elithabisako futhi amaqembu nokuguqulwa for lapho Rio de Janeiro waziwa kungathiwa kanye Pagode, umthombo kakhulu wayethanda futhi usekelwa style musical, lapho uhlanganisa futhi eyandisa zonke izici othandekayo kakhulu Samba - the beat and the lyrics, kanye umuzwa kanye ithuba lokubandakanya izixuku ezincane nezinkulu kwelinye song inkanuko.
Sociability Ukuba omunye eziphawuleka kakhulu kwezimfanelo yamasiko Abantu Carioca, uma kuziwa ujabulela umculo bonke ihlanganyela iqembu, kungakhathaliseki ukuthi okwenza kube noma ehlabelela: e Rio the Nemvelo abathanda umculo kubaluleke kakhulu njengoba iyona isigqi ngokwayo.
A beat yesimanje wehla evela Favelas futhi athatha izintambo iziteshi zomsakazo nobusuku amaqembu iyona Funk Carioca, ngezinye izikhathi okuthiwa "Funk". Lokhu beat kuhlanganisa tincenye rhythmical kusukela Electronic, Samba, Hip Hop kanye Ukwahlanganiswa. Kuyinto ethandwa kakhulu esikhathini omncane izixuku sibonga izingoma esimnandi abadlali ovelele, kanye amamiksi owadalwa DJ ukuthi ukuhlanganisa le ukuhluza kanye nezinye izithunywa dance umculo emhlabeni.
Rio de Janeiro siyikhaya omakhelwane phezu 160, futhi ngokwemvelo eziningi zasungula ungubani ecacile zomculo - ngokuba lokhu mayelana izikhungo, isigqi ethandwa, noma kokubili.
Abanye omakhelwane kusezingeni kuphawulwa izigubhu, ezifana Lapa, isikhungo bohemian komuzi, lapho amanye umhlabeleli zokudla informal and nemigoqo zitholakala. abaningi Cariocas nezivakashi ukhetha Lapa ukuba bahlanganyele the fun of nokudansa savoring okujabulisa Rio sika. Kule ngxenye oyingqophamlando ka edolobheni zitholakala ezinye izikhungo edume kakhulu futhi bendabuko lapho Samba uhlala, futhi lapho wonke umuntu uthola kwabacasula by the bee ukudansa.
Ezenye izifunda ukugxila ambiances and netindlela letehlukene - Ipanema siyikhaya eziningi bendabuko Bossa Nova izikhungo, futhi Sebawoti siphile ukusebenza kwansuku zonke. Futhi in Ipanema, kukhona eziningana zamasiko kanye nezitolo, lapho izivakashi ungathola izincwadi, amarekhodi kanye zenkolo ezivela emlandweni futhi izimpilo exponents kunabo bese uhlobo uqobo.
Brazilian umculo Imboni self-esimeme: kukhona abaculi ngokwanele futhi abaqambi yesehlakalo ukukhiqiza into yonke ukunambitheka ezilalelini lapho, inikezwe umphakathi enkulu kanye ezihlukahlukene izinhlobo, kuyinto ophawulekayo. Lokhu kubuye isizathu esenza umculo Brazilian kahle kangaka emhlabeni wonke, futhi kungani izinga layo uphakeme kakhulu futhi isisayine abunaphutha kanjalo.
Aphile umculo Rio de Janeiro kungenye imifanekiso enkulu leli dolobha, futhi kugujwa njengoba Sugar Loaf Intaba, kwesithombe UKhrestu, noma eceleni komgwaqo black and white of Copacabana libalele.
Amakhonsathinoma ngezinga elikhulu izenzakalo musical kukhona nje ingxenye zomculo landscape dolobha - ukuthi kungenxa sigubha ekuqaleni isigaba, a holiday kazwelonke noma zendawo, eklabalasa ngoba ukunqoba lebhola noma imikhosi yenkolo, Cariocas ngentokozo ukujoyina izinhliziyo zabo futhi amazwi emakhorasi nokuguqulwa.
Umculo Rio kuyingxenye eyisisekelo Carioca ungubani - ukuqonda lokhu kuvumela isivakashi ukuba siqonde ukuphila edolobheni kangcono, futhi ukwakha uxhumano obujulile bendawo. Ukwazi kancane mayelana Rio de Janeiro sika amasiko emculweni futhi amagugu ngeke uthole enkulu, smile olufudumele out of yimuphi Carioca.
Ezinyangeni ayandulela ZomkhosiI LOVE Rio inikeza ulwazi oluthile mayelana samba esikoleni ezazifundiswe, izingubo nezingoma.
It inikeza izakhamuzi nezivakashi namathiphu okuthi ungawusebenzisa kanjani kangcono ukujabulela izibuko ezinkulu futhi bazibandakanye. Yonke imininingwane kulekelelwa siqonde umlando kanye nokuthuthukiswa samba kanye zomkhosi yamathanga, kuhlomisa abafundi kanye liqonde mkhosi emhlabeni wonke.
Portal kuyingxenye I LOVE RIO iphothifoliyo imikhiqizo, ngamunye usebenzisa indlela ehlukile ukukhuthaza image kanye isiko Rio de Janeiro.